Kunetsekana muTunes uye iCloud yeWindows kwakatendera makomputa kubiwa | IPhone nhau
Kunetseka muTunes uye iCloud yeWindows kwakatendera makomputa kubiwa
Mumakore achangopfuura, kurwira kwerudzikinuro kwave kutemesa musoro kumakambani makuru, uye kwete akakurisa, zvekuti vanoona sevanhu vese data rakachengetwa pamakomputa ane hutachiona rakanyorwa uye haugone kuzviwana, kunze kwekunge vaenda kunyoresa uye vobhadhara password iyo inofungidzirwa kuti inovhura mukana weiyo data.
Morphisec vaongorori vakaona kukanganisa kwekuchengeteka mune zvese iTunes uye iCloud yeWindows, iyo yaibvumidza shamwari dzevamwe kutora mukana wekusagadzikana kweiyo Bonjour application, chishandiso chinotibvumidza kuziva nguva dzese kana tine zvitsva zvitsva zvichimirira kumisikidzwa.
Varwisi vakakwanisa kushandisa izvi kusagadzikana, izvo haina kuwanikwa neantivirus sezvo yakasainwa neApple yaive yakachengeteka zvachose, kuita rudzikunuro kurwisa, uchibvumira komputa kubiwa, zvirimo zvakavharidzirwa uye kiyi yakakumbirwa mukutsinhana nekutengeswa kwemari.
Bonjour haisi chikamu cheTunes kana iCloud zvinoshandiswa, asi asi inoshanda yakazvimirira, Naizvozvo, kana uchibvisa zvese zvinoshandiswa, chishandiso ichi chiripo muchirongwa, saka huwandu hwemakomputa angave akafumurwa hwakanyanya kwazvo, kunyangwe zvadzima ese maapplication.
Uku kunetsekana kwakaonekwa Nyamavhuvhu apfuura naMorphisec, apo mumwe wevatengi vako akabatwa neBitPaymerhlengwareware. Ivo vakakurumidza kubata iyo Cupertino-yakavakirwa kambani inoratidzira zvese nezve mashandiro eutachiona uhwu uye kuti yakanga yakwanisa sei kusvika kumakomputa ekambani.
Kana iwe ukashandisa Windows uye uine iTunes yaiswa, iri kutotora gadziridza zvese iTunes uye iCloud kuburikidza neiyi link. Kana iyo vhezheni yeTunes yawakaisa ichibva kuWindows Store, iwe unofanirwa kungoiwana uye kugadzirisa iyo application. Uku kunetseka hakukanganise makomputa anotarisirwa neMacOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » Kunetseka muTunes uye iCloud yeWindows kwakatendera makomputa kubiwa
Apple's 5G chip ichasvika mu2022 sekureva kweKambani Yakakurumidza
Amazon Music inouya kuApple TV kujoina Spotify uye Apple Music